Imithi yokugoma engu-1.5 million kungenzeka iphelelwe yisikhathi ingasebenzile | Scrolla Izindaba
Imithi yokugoma engu-1.5 million kungenzeka iphelelwe yisikhathi ingasebenzile
Imithamo eyizigididi ezingu-1.5 zomuthi wokugoma eNingizimu Afrika i-Astrazeneca, njengamanje ayisebenzi ihleli ezindaweni zabo zokugcina izimpahla – futhi isengozini yokuphelelwa yisikhathi.
Balinde ukuthunyelwa kwayo emazweni angaphansi kwe-African Union.
Kodwa usuku lwemithi yokugoma lokuphelelwa yisikhathi lusondela ngokushesha, futhi isengozini yokungasetshenziswa.
Ngakho-ke abantu baseNingizimu Afrika, kanye nabanye base-Afrika, basengcupheni yokungazuzi kule mithi yokugoma.
Ezinsukwini ezimbili nje vo ngemuva kokufika kwemithi ezweni ekuqaleni kukaNhlolanja, uhulumeni uthathe isinqumo sokumisa ukukhishwa kwayo.
Lesi sinqumo senziwe ngemuva kokuthi ucwaningo luphakamise ukuthi umuthi wokugoma kuphela unenani elisebenzayo lamaphesenti ayi-10 uma liqhathaniswa negciwane elinamandla eNingizimu Afrika, linikeza ukuvikeleka okuncane ekuguleni okulingene nokuncane.
Okungabhekwanga ukuthi lomuthi ngabe uyawunqanda ukugula noma ukushona okunzima.
Akukaze kube khona olunye ucwaningo mayelana nokusebenza komuthi wokunqanda ukugula okunzima. Kodwa kubantu abayi-2 000 ababambe iqhaza ocwaningweni, akekho noyedwa oshonile noma olaliswe esibhedlela.
USolwazi uShabir Madhi, umphenyi oyinhloko yokuhlolwa kwemithi yokugoma i-Astrazeneca eNingizimu Afrika, usanda kutshela i-News24 ukuthi “udumele” ngesinqumo sikahulumeni sokuthi “alahle” umuthi wokugoma i-Astrazeneca.
Uveze ukuthi ingasetshenziswa ngokusezingeni phakathi kwabantu abasengozini enkulu ukunqanda ukushona kwabantu kanye ngokugcwala ezibhedlela.
Manje, kungenzeka ingasetshenziswa yinoma ngubani, ngoba isengozini yokuphelelwa yisikhathi.
USolwazi Madhi uthe, “umuthi wokugoma ulahliwe, futhi akukho okunye.”
Uthe, izwe lidinga ukulungisa kabusha ukuqonda kwalo ukuthi yimiphi imigomo yesizukulwane sokuqala ekwaziyo ukuyenza.
Yize abanye bengaba nobuthakathaka, basenganqanda abantu ekuguleni kakhulu nasekushoneni. Ngakho-ke ungcono kakhulu umuthi wokugoma kungenalutho.
Ngemuva kokuthi uhulumeni ethathe isinqumo sokuqeda ukusetshenziswa komuthi wokugoma i-Astrazeneca, uzame ukuwubuyisela e-Serum Institute of India (SII). Ngemuva kokuthi lokhu kungasebenzi, badayisele i-African Union.
Umthombo wesithombe: @Reuters